ဆင်တုပ်ကွေး (Chikungunya - ချီကန်ဂန်ညာ)
Laboratory and Specialist Clinic
Hot Line - 09-450855777
Chikungunya နာမည်ကို ရောဂါစတင်တွေ့ရှိရာ တန်ဇန်းနီးယား နိုင်ငံ လူမိုးစု ဘာသာစကားမှစတင်မြစ်ဖျားခံခဲ့ပြီး တွန့်လိမ်ကောက်ကွေးခြင်းလို့အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ် ။ ရောဂါ ခံစားရသူများ နာကျဉ်ကိုက်ခဲ၍နေခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်။
ရောဂါပိုးသယ်ဆောင်ထားသောခြင်ကိုက်ခံရ၍ဖြစ်ပါသည်။ခြင်ကိုက်ခံရပြီး ၃ရက်မှ၅ရက်တွင် လက္ခဏာ စတင်ခံစားရပါသည်။ခြင် အမျိုးအစား(Aedes aegypti & Aedes albopictus) က သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဖြစ်စေသော ခြင် အမျိုးအစားနှင့်အတူတူဖြစ်ပါတယ်။
အဓိက လက္ခဏာ ကတော့ ဖျားပီး အဆစ်အမြစ်လွန်စွာ ကိုက်ခဲခြင်းဖြစ်ပါသည်။လူနာအများစု (၈၇%-၉၀%)မှာကိုက်ခဲ ကြပါ တယ် ။၄င်းအပြင် ခေါင်းကိုက် ခြင်း ကြွက်သားများနာကျင်ခြင်း အဆစ်အမြစ်ရောင်ခြင်း အရေပြား အကွက်ပေါ် ခြင်းများလဲဖြစ်တတ်ပါသည်။ များသောအားဖြင့် သေစေနိုင်သော ရောဂါ မဟုတ်ပါ ။ လူအများစုတွင် ရက်သတ္တ ပါတ် အနည်းငယ်အတွင်း ရောဂါ ပျောက်ကင်းသွားလေ့ရှိပြီး အချို့သောသူများတွင် အဆစ်နာကျဉ်ခြင်းအား လပေါင်းများစွာ ခံစားရနိုင်ပါသည်။ရောဂါ ဖြစ်ပြီးသူများအနေဖြင့် ခုခံစွမ်းအား ရရှိပြီး နောက်ထပ် ထပ်မံမဖြစ်နိုင်တော့ပါ။သွေးလွန်တုပ်ကွေးနှင့်မတူပဲ ၄င်းတွင် မျိုးကွဲ မရှိ၍ဖြစ်ပါသည်။
မွေးကင်းစကလေးငယ်များ အသက် ၆၅နှစ်အထက်လူကြီးများ သွေးတိုး ဆီးချို နှစ်လုံးရောဂါ အခံရှိသူများတွင် ပိုမိုခံစားရလေ့ရှိပါသည်။
ရောဂါကူးစက်ခံရသူ၏ ကိုယ်တွင်း မှာ ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးသည်၅ -၇ ရက် ရှိနေနိုင်သဖြင့် ထိုအချိန်အတွင်း ကိုက်သောခြင်တဆင့် အခြားသူအား ကိုက်ခံရပါက ကူးစက်နိုင်ပါသည်။ လူတစ်ဦး မှ တစ်ဦးသို့ တိုက်ရိုက်မကူးစက်နိုင်ပါ ခြင်ကိုက်ခံရခြင်းမှ သာကူးစက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အနားယူ ပါ အရည်များများသောက်ပါ အဖျားအနာသက်သာအောင် ပါရာစီတမောဆေးကို ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းသောက်ပါ (အက်စပရင် နှင့် အခြားအကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြား ချက်မပါဘဲ မသုံးသင့်ပါ) ပထမ တစ်ပါတ်အတွင်းခြင်ကိုက်မခံရအောင် ဂရုစိုက်ပါ(အခြားသူများမကူးစက်နိုင်ရန်)
ရောဂါရာဇဝင် ? ပထမ ဆုံးသော လူကူးစက်ခြင်းကို ၁၉၅၀ မှာ အာဖရိက တွင် စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြါသည်။ ၁၉၆၀ တွင် ဘန်ကောက် ၁၉၆၃ မှ ၁၉၇၃ တွင် အိန္ဒိယတို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးပါသည် ။ ၂၀၀၄ မှာ ကင် ညာ နိုင်ငံမှတဆင့် နိုင်ငံ တော်တော်များသို့ ကူးစက်ပြန့်နှံ့ ခဲ့ပါသည် ။မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၀၅ ခုနှစ် ကထဲ က ရောဂါဖြစ်ပွားမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ၂၀၁၃ တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်လဲ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုရှိခဲ့ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကာလအတွင်း ရောဂါကူးစက်ခံ ရပါက အခြားသူများကဲ့သို့ ဖျားခြင်း ကိုက်ခဲခြင်းများ ခံစားရနိုင်ပါသည်။ ကိုယ်ဝန် ပျက်နိုင်ခြေ အလွန် နည်းပါသည်။ သန္ဓေသားကိုကူးစက် နိုင်ခြင်းမရှိပါ ။သို့သော် မွေးဖွားချိန်တွင် ရောဂါပိုး ဗိုင်းရပ်စ် များပြားနေချိန် ဖြစ်ပါက မွေးကင်းစ ကလေးအား ကူးစက်နိုင်ပါသည်။ မွေးလာသော ကလေး အား မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းဖြင့်ကူးစက်မှုကို ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါ နှင့်ရောဂါ လက္ခဏာ ဆင်တူသည်။ထို့ကြောင့် ဂရုစိုက်ကုသင့်ပါသည်။
ဆင်တုပ်ကွေးဖြစ်ရင် အရေပြားမှာ အဲသလိုအနီစက်တွေထွက်တတ်ပါတယ်။
Accuracy, Timeliness, Expertise Passion to Care
အင်ကြင်းဖြူ အထူးကုဆေးခန်း အမှတ် (၂၂)၊ လမ်း (၃၀)၊ ၆၃x၆၄လမ်းကြား၊ အောင်တော်မူရပ်၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ 09-450866777
အမှတ် (၅၁/I)၊ လမ်း ၃၀၊ ၇၇x၇၈ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
အသည်းရောဂါဖြစ်စေတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းတွေက ဘာတွေလဲ။
No. 51/I, Between 77th and 78th Streets, Chanayetharzan Township, Mandalay.
No.16 , Beside YGN-MDY Road,Pyi Lone Naing Quarter,Kyaukse
09-770707047 , 09-954400034
Near Mandalay Street Point,Quard4), Lashio
09-400499941 , 09-400499942
No.470,Thitsar Street Quarter(3),
South Okkallapa , Yangon.
09-765452996 ,09-765452997 ,
30th street , Between 63×64 Streets , Mandalay